Ogaden News Agency (ONA) – Filim: Gabay ay tirisay Hawenay Somaliyeed iyo Haweenka Somalida Ogadeniya Hormuudka qadiyada Ogadeniya-Shirkii London
Filim: Gabay ay tirisay Hawenay Somaliyeed iyo Haweenka Somalida Ogadeniya Hormuudka qadiyada Ogadeniya-Shirkii London
Posted by ONA Admin	/ February 1, 2012
Hoos Ka Daawo Filimka:
ONA London: Shirkii London ka dhacay 29.01.2012 ayaa waxa haweenka Jamuhuriyada Somaliya ay kasoo Jeediyeen gabay ay ku taagerayaan Qadiyada Somalida Ogadeniya.
ONLF Guulaysatay oo Gaadhay Libintiiye,
Nin Axmaarka Garab Siiyayow Wuu ku Gaasiriye,
Gowraca Walaalkaa Miyaad Gaalo Ugufaani
Gabaygan oo ah gabay ay xikmad badan ku jirto ayaa Marwo Sucaad Ismaaciil ay amaan ugu soo jeedisay halganka ay hoggaaminayso Jabhada wadaniga Xoreynta ogadeniya.
Shirkan ayaa waxa uu ahaa shir ay haweenka Somalida Ogadeniya ay ka qaateen kaalinta ugu xooga badan la’aan toodna uu qabsoomeen. Haweenka Somalida Ogadeniya waxay kujiraan kaalinta kowaad goobkasta oo dhaqdhaqaaq halganku ka socdo. Shirkii London lagu qabtayna waxa ay muujiyeen awooda ay haweenka Somalida Ogadeniya ku leeyihiin Halganka. Haweenka Ogadeniya waxa ay soo jitaan oo ay qadiyada ubandhigaan haweenka somaliyeed midaas oo keentay in haweenka jamuhiriyada somaliya ay si xoogan u taageeraan qadiyada Ogadeniya waqti aysan jirin dowlad somaliyeed oo ka shaqeysa midnimada somalida.
Hoos waxa aad ka daawata Filim Kooban oo aan ka soo qaadnay Shirkii Madaxda Jabhada ONLF ay kula hadlaysay Jaaliyada Somalida Ogadeniya iyo Somalida ku nool UK. Halkaas oo Haweenku ay kasoo jeediyeen hadalo iyo Gubaabo halganka lagu tageerayo.
Sidoo kale Waxa dhowaan aad heli doontaan Qudbadi Gudomiyaha Admiral Maxamed Cumar Cismaan uu kasoo jeediyay Shirkaas iyo waliba xogag dheeraad ah oo ku saabsan shirkii taariikhiga ahaa ee ka dhacay wadanka UK ee loogaga xog waramayay Qadiyada Ogadeniya. Qudbadaas Gudomiyaha waxa uu kaga xog warami doona Mowqifka ONLF ee ku aadan Somaliya, Midka ku aadan Wadahadalka dhexmari kara ONLF iyo Ethiopia iyo cadaadiska gumeysigu ku hayo Geeska Afrika gaar ahaan Shacabka Ogadeniya iyo Somaliya.
faisal gantaal says:
masha allah umadaydu midnimo bay muujisay guushuna waay timaaday halkudhagii ahaa mintid iyomidnimo isku tashi bay ka dhabayeen
waa in shalla guul ilahay idiinkiisa sanadkan waxaan ka baryaana in uu ka dhiigo sanadkii ogadeenia iyo dhamaan somali oo ilahay gumaysiga ina kale goostay inaga dul qaado ogadenia oo xorowdo somalia o hagaagta inshalla